Taariikhda My Butros » Waxaad dhahdaa No Si Taariikhaha First kulul
Taariikhaha First aad dhab ahaantii u baahan tihiin inaad aado
Dhis qaar ka mid ah xusuus xiiso leh bedela oo aan u casho ah sawirrada iyo filim.
Habeenka Cayaarta: Fun koob khamri ah ama laba. Ka dalbo pizza ah, qodo baxay kulan jir guddiga dugsiga aad ka carruurnimada (qabaa Operation, Twister, Garo Yaa?) oo waxaad la yaabi doonaa sida badan madadaalo aad qabto!
Qabo Gig A: Live music qaadataa cadaadiska off xoogaa yar. Waxaad la hadli kartaa iska badan cabniin ah laakiin ma yeelan doonaan in ay buuxiyaan taariikhda oo dhan la wada hadal joogto ah.
Zoo / Aquarium: Wax badan si ay u arkaan oo ay ka hadlaan. Sidoo kale, haddii aad tahay qof yar oo xishood, daawashada xayawaanka waa hab fiican oo lagu baxdaan awkwardness taariikhda ugu horeeyay – gaar ahaan haddii aad tahay at xero daanyeer ah.
Hawlaha Adventure: Naftiina Hor-leh hawlaha sida xuubka zip, segways iyo fuulitaanka dhagax weyn. Madadaalo maalin A baxay baahan shaqo badan oo kooxda.
Dawaafo geeduhu: Waa qayb ka ah hadal haynta badan laakiin taas sababtoo ah waa madadaalo, jaceyl oo caadi ah oo isku mar. Dooro boos quruxsan; labada keeno cunto uu jecel yahay iyo sibraar shekaynaysay aad - taataabtay oo jaban!
Dating Split: Qof kasta oo u maleeyo inay wax ka ee taariikhda badhkiis. Qaabkan waxaad labada ogaato wax ku saabsan midba midka kale iyo sidoo kale wax isku jira waxoogaa!